DEG DEG:- Ciidanka dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed oo dib ula wareegay deegaanka Goof-gaduud – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Ciidanka dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed oo dib ula wareegay deegaanka Goof-gaduud
Ciidamada dowladda federaaalka Soomaaliya oo garabsanaaya kuwa maamulka Koonfur Galbeed ayaa la sheegayaa in goordhaw ay dib ula wareegeen deegaanka Goof-gaduud oo qiyaastii 30km u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Dagaalyahada Al-shabaab ayaa gelinkii hore ee maanta la wareegay gacan ku haynta deegaanka Goof-gaduud, kadib markii ay halkaasi dagaal uga saareen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya oo halkaasi gacanta ku haayay.
Sidoo kale, mas’uul ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta Muqdisho ayaa sheegay in dagaal rogaal celis ay kusoo qaadeen deegaanka Goof-gaduud, iyadoona ugu dambeyn ay u suurto gashay inay la wareegaan gacan ku haynta daagaankaas.
Dhinaca kale, ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa haatan dhaq-dhaqaaqyo aad u xoogan ka wada deegaanka Goof-gaduud, iyadoona xaaladda deegaankaasi ay maanta tahay mid aad u kacsan.
Dagaalyahanadda Al-shabaab ee isaga baxay deegaanka Goof-gaduud ayaa la sheegayaa inay haatan ku sugan yihiin duuleedka deegaankaasi, iyadoona weli ay jirto cabsi ku aadan in markale uu dagaal ka dhaco halkaas.
Ugu dambeyntii, dagaalkii saakay ka dhacay deegaanka Goof-gaduud ayaa la sheegayaa inay ka dhasheen qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac, inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin karin inta qasaarahaasi uu gaarsiisan yahay.